अब हामीले आफै देशमा उत्पादन बढाउनु पर्दछ र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्नै पर्छ - Wnepal.com
पर्शुराम कुँवर बैकिङ्ग इतिहासमा चिनाई राख्नु पर्ने व्यक्तित्व होइन । ३ दर्शक भन्दा बढी बैकिङ्ग क्षेत्रमा विताउनु भएका पर्शुराम कुँवर क्षेत्री नेपालकै सबैभन्दा ठूलो चुक्ता पूँजी भएको बैंक ग्लोबल आईएमई बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुनुहुन्छ ।
नेपाल ४०/४५ दिन देखि लकडाउनमा छ । जनता घरभित्रै अदृश्य शक्तिबाट आएको रोग कोरोना भाईरस विरुद्ध लडिरहेका छन् । अत्यावश्यकका केही उद्योगधन्दा बैंक बीमा त खुलेका छन् । तर, पर्यटन, होटल बन्द नै छन् । यो लगातारको लकडाउनले नेपालको अर्थतन्त्रलाई कस्तो असर पर्दछ । बैंकले ब्याजदर घटाउन पर्ने चर्को आवाज उठेको छ । रेमिटेन्स घटेको छ । यी र यस्तै विषयमा पूराना बैंकिङ्ग व्यक्तित्व एवं ग्लोवल आईएमई बैंक लिमिटेडका सीइओ पर्शुराम कुँवर संग भूपेन्द्र आचार्यले गरेको कुराकानी ।
राज्यलाई पत्याउने देश नै रोहिरहेका चाहि छन् । ५५ अर्ब खर्च छ । राजश्व १०/१२ अर्ब उठेको छैन ? कामदार मजदूरलाई राहत दिने हो । सानालाई राहत छैन । ठूला हुने खानेहरुले राहत माग्ने ? संसारभरी गरिब मजदूर बिपन्नलाई राहत दिएका उदाहरण छन् । मजदूर वर्ग चुप छ । उसको कुरा सुनिदैन अनि ठूलो वडा चाहि ठूलो स्वरमा राहत मागिरहेका चाहि छन् । यो राम्रो होइन ।
यो कति समय जाने हो । त्यसमा भर पर्दछ । औषधी कहिले आउने हो । रोगको परिक्षण कहिले सकिने हो । यसमा भर पर्दछ । भारत, रसिया, बेलायतमा यो रोग बढेको छ । अरु देशमा चाहि क्रमश घटेको देखिन्छ । त्यसकारण पहिला रोगथाम हुनुपर्दछ । लकडाउन थपिएको थपिएै छ, स्थिति राम्रो छैन । बैशाख २३ गतेसम्म १० अर्बको हाराहारीमा राजश्व उठेको तथ्याङ्क छ । खर्च चाहि ५५ अर्ब भन्दा बढि छ । अनि अर्थतन्त्र कहाँ पुग्दछ ? गतवर्ष यहि बेला ६० अर्ब राजश्व उठेको थियो । तर, अहिले ८०÷८१ अर्बको टार्गेटमा १० अर्ब उठेको छ । अर्को कुरा आम्दानी घटेपछि माग्ने बढेको चाहि छन् ।
राज्यले कृषि उत्पादन किन्छु भन्ने वित्तिकै कृषिका उत्पादन बढ्ने छन् । रोजगार बढ्ने छ । त्यसकारण यो अवसर पनि हो । यसलाई सदुपयोग गर्दै जानु पर्दछ । साच्चै भन्दा यो बेला आफ्नो आँखाको आशु आफै पुस्ने हो । आफ्ना लागि आफैले गर्ने हो । अरुले गर्दैन । यो बुझ्नु जरुरी छ । मागेर कति दिन चल्दछ । काम गरेर खाने हो । हिम्मत गर्ने हो । स्रोत जुटाउने योजना बनाउने र रोजगारी सृजना राज्यले गर्नुपर्दछ ।